Izindaba - Joyina iHigg Index
Ithuthukiswe yi-Sustainable Apparel Coalition, i-Higg Index iyithuluzi lamathuluzi anika amandla ama-brand, abathengisi, nezinsiza zabo bonke osayizi - kuzo zonke izigaba ohambweni lwabo lokusimama - ukukala ngokunembile nokukora ukusebenza kokuqina kwenkampani noma komkhiqizo. I-Higg Index iletha ukubuka konke okuphelele okunika amandla amabhizinisi ukuthi enze intuthuko ebonakalayo evikela inhlalakahle yabasebenzi basezimboni, imiphakathi yasendaweni kanye nemvelo.
Amathuluzi weHigg Facility alinganisa imithelela yokusimama kwezemvelo nezenhlalo ezindaweni zokukhiqiza emhlabeni jikelele. Kunamathuluzi amabili e-Higg Facility: IHigg Facility Environmental Module (Higg FEM) neHigg Facility Social & Labour Module (Higg FSLM).
Ukumiswa Kokulinganiswa Kwemithelela Yezenhlalo Nezemvelo Ezinsizeni
Izingubo zokugqoka, izicathulo, nezindwangu kwenzeka ezinkulungwaneni zezikhungo emhlabeni jikelele. Isikhungo ngasinye sibamba iqhaza elibalulekile ekusimameni ngokuphelele komkhakha. Amathuluzi e-Higg Facility ahlinzeka ngokuhlola okulinganiselwe kwezenhlalo nezemvelo okusiza izingxoxo phakathi kozakwethu bezinani lentengo ukuze kuthuthukiswe ngokwenhlalo nangokwezemvelo yonke imikhakha yohlu lwamanani omhlaba.
Imojuli Yezemvelo yeHigg Facility
Izindleko zemvelo zokukhiqiza nokugqoka izingubo ziphakeme. Ukwenza i-jeans ejwayelekile kungadinga cishe amalitha amanzi angama-2 000 kanye nama-megajoules angu-400 wamandla. Uma sekuthengiwe, ukunakekela lelo jean elifanayo kuyo yonke impilo yalo kungakhipha ngaphezu kwamakhilogremu angama-30 esikhutha. Lokho kulingana nokushayela imoto amamayela angama-78.
I-Higg Facility Environmental Module (i-Higg FEM) yazisa abakhiqizi, ama-brand, kanye nabathengisi ngokusebenza kwemvelo kwezikhungo zabo ngazinye, ibanike amandla wokukhuphula izinga lokusimama.
IHigg FEM inikeza izikhungo isithombe esicacile ngemithelela yazo kwezemvelo. Kuyabasiza ukukhomba nokubeka phambili amathuba okuthuthuka kokusebenza.
Imodyuli yeHigg Facility Yezenhlalo Nabasebenzi
Wonke umuntu ufanele ukusebenza endaweni ephephile nenempilo lapho ethola iholo elifanele. Ukwenza ngcono izimo zenhlalo nezabasebenzi kubasebenzi abakhiqiza izigidigidi zezingubo, izindwangu nezicathulo unyaka nonyaka, abakhiqizi nabakhiqizi badinga ukukala umthelela wezenhlalo wezikhungo zomhlaba wonke.
I-Higg Facility Social & Labour Module (i-Higg FSLM) igqugquzela izimo eziphephile nezingakhethi zenhlalo nezabasebenzi kubasebenzi bezinkokhelo zamanani emhlabeni wonke. Izinsiza zingasebenzisa ukuhlolwa okuzuziwe ukuqonda izindawo ezishisayo nokunciphisa ukukhathala kwamabhuku. Esikhundleni sokugxila ekuthobeleni, banganikela ngesikhathi nezinsizakusebenza ekwenzeni ushintsho oluhlala njalo lohlelo.
Qhubeka nokujoyina i-HIGG ukufeza ukuzihlola okusha okwenza inkampani ikwazi ukuhlola izinhlobo zezinto ezibonakalayo, imikhiqizo, izitshalo zokukhiqiza kanye nezinqubo zokucubungula ngaphakathi kokukhethwa kwemvelo nokuklanywa kwemikhiqizo.
I-HIGG Index iyithuluzi lokubika lokusimama elijwayelekile elisetshenziswe ngabakhiqizi abangaphezu kwezi-8,000 nemikhiqizo engama-150 emhlabeni jikelele.Iqeda isidingo sokuzihlola okuphindaphindwayo futhi isiza ukuthola amathuba okuthuthukisa ukusebenza.
Isikhathi Iposi: Apr-05-2020